နယူးယောက်မြို့တော် အကြောင်း သိကောင်းစရာ June 30, 2021
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အကြောင်း သိကောင်းစရာ July 17, 2021
ယူအေအီး နိုင်ငံ အကြောင်း သိကောင်းစရာ July 17, 2021
လန်ဒန်မြို့တော် အကြောင်း သိကောင်းစရာ June 28, 2021
သြစတြေးလျတိုက် အကြောင်း သိကောင်းစရာ June 28, 2021
Private: စင်ကာပူ ဒေါ်လာ ငွေစက္ကူတွေပေါ်က မျက်နှာပိုင်ရှင်အကြောင်း
Private: မြန်မာနိုင်ငံက ဘာမြူဒါ (သို့) မြန်မာ့ပြန်လမ်းမဲ့ရေကန်
နယူးယောက်စီးတီး (သို့) နယူးယောက် ဟုခေါ်လေ့ရှိကြသော နယူးယောက်မြို့သည် အမေရိကန်၏ အကြီးဆုံး နှင့် လူဦးရေအများဆုံးမြို့ကြီးဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်း...
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးဆုံး ပင်လယ်အော်ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၏ အရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် တည်ရှိသည်။ ပင်လယ်အော်ကြီးသည် တြိဂံပုံသဏ္ဍာန် နှင့် ဆင်တူပြီး...
ရေးသားသူ - ကောင်းစည်သူ အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်း၊ ပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ရှိ အာရေဗျ ကျွန်းဆွယ်၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည့် အာရပ် စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ(ယူအေအီး)...
၇နှစ် အရွယ်ဆိုတာ မြင်မြင်သမျှ စိတ်ကူးယဉ်ပြီးတွေးတတ်တဲ့ အရွယ်ပါ ။...
သမိုင်းမစတင်မီခေတ်က သတ္တဝါလို့ ဆိုလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသိကြတာကတော့ ဒိုင်နိုဆောပါ။ အဲဒီနောက်တော့...
Private: အင်္ဂလိပ်စာ ဘယ်လိုဖတ်မလဲ? (သို့) အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ဖို့ အရိုးရှင်းဆုံးလျို့ဝှက်ချက်များ
လန်ဒန်မြို့ဟာ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း နဲ့ အင်္ဂလန်တို့ရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့တော် နဲ့ လူဦးရေအများဆုံးမြို့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိတ်ဗြိတိန်ကျွန်းကြီးရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက် သိမ်းမြစ်ကမ်းပေါ်မှာ တည်ရှိနေပါတယ်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်စာရင်းအရ လန်ဒန်မြို့ရဲ့ လူဦးရေဟာ ၈.၉သန်းဖြစ်ပြီး မော်စကို နဲ့ အစ္စတန်ဘူလ်တို့ပြီးရင်...
သြစတြေးလျတိုက်ဟာ တောင်ကမ္ဘာလုံးခြမ်းမှာ တည်ရှိပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ တိုက်ကြီး ၇ တိုက်အနက် အသေးငယ်ဆုံး တိုက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သြစတြေးလျတိုက် ကုန်းမကြီးအပြင် ၊ တက်စ်မေးနီးယား ၊ နယူးဂီနီကျွန်း နှင့် အခြားကျွန်းငယ်များတို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ သြစတြေးလျတိုက်မှာ သြစတြေးလျ...
Via : VOA Burmese, BBC Burmese The group of seven လို့ ရည်ညွှန်းတဲ့ G7 ကို မြန်မာလိုတော့ စက်မှုထိပ်သီးနိုင်ငံများလို့ အများစုက ခေါ်ဝေါ်ပြောဆိုကြပါတယ်။ g7 မှာ...
ဘူတန်နိုင်ငံဟာ ဟိမဝန္တာ တောင်တန်း၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိသော တောင်အာရှ ဒေသ ရှိ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံ ငယ်လေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဘူတန် လို့ခေါ်နေကြပေမယ့် သူ့ရဲ့တကယ့်နာမည်အမှန်က ဘူတန်ဘုရင့်နိုင်ငံ(Kingdom of Bhutan) ဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့ဘက်၊ အနောက်ဘက်နှင့်...
ဂျမေကာ နိုင်ငံဟာ ကာရစ်ဘီယံပင်လယ်အတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ ကျွန်းစုနိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂရိတ်တားအန်တီးလီစ်ကျွန်းစုအတွင်းမှာ ပါဝင်ပြီး ကာရစ်ဘီယံထဲမှာဆိုရင် ကျူဘား နဲ့ ဟစ်ပါနီယိုလာ ကျွန်းတွေပြီးတဲ့နောက် တတိယအကြီးဆုံးကျွန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျူးဘားနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက် မိုင် ၉၀ အကွာ ၊ ဟေတီ နဲ့...